Na-erite uru ahụike nke mmadụ niile ma hụ na nchekwa nri, ma baara ọha mmadụ uru.
Shanghai Chuangkun Biotech Inc. bụ onye na-eweta ọrụ ọkachamara na ọrụ nyocha mkpụrụ ndụ na nchekwa nri / ọgwụ POCT ngwangwa nyocha nyocha ihu igwe. Ndị isi ntọala nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ndị isi ọrụ na ndị isi ọrụ aka nke nnukwu ụlọ ọrụ ndị etinyela aka na IVD ma ọ bụ ụlọ ọrụ metụtara ya karịa afọ 10. Ha nwere mkpuchi zuru ezu site na R & D, ahịa ruo ahịa, ma nwee ahụmịhe ụlọ ọrụ bara ụba. Ntuziaka azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ nwere atụmanya ahịa sara mbara, na teknụzụ ya na-eduga ma na-asọmpi.
Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa ndị isi ụlọ ọrụ ahụ bụ ọrụ nyocha mkpụrụ ndụ ophthalmic na nchekwa nri / ọgwụ POCT na ngwa ngwa nchọpụta ngwa ngwa, nke bụ ezigbo ngwaahịa nnwale mba ọzọ ma ọ bụ nyiwe na mba na-eduga na teknụzụ ndị bụ isi. Shanghai chuangkun ndu, dị ka izugbe gị n'ụlọnga na China, bụ maka maka mbara nkwalite, mmepe, ahịa na mgbe-sales ọrụ nke Chinese ahịa. Ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ịmebata teknụzụ mba ọzọ na-eduga ngwaahịa na nyiwe dị elu, na-emewanye nkwalite ma gbasaa mmepe, dọtakwa ahịa sara mbara nke China, na-arụkọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ ọwa, ndị ọrụ na ndị ahịa njedebe, nweta mmeri mmeri ma chọọ mmepe nkịtị, elu-ọgwụgwụ ule ngwaahịa na technology n'elu ikpo okwu nwere ike etinyere na-ekere òkè China si nnyocha ahịa.
The ụlọ ọrụ bụ isi ekwenye ahịa bụ mahadum na nnyocha sayensị institutes,-atọ ndị ọzọ ọgwụ nnyocha emmepe, IVD molekụla nchoputa ụlọ ọrụ, nri ụlọ ọrụ, n'ógbè na ọchịchị emmepe maka ọrịa akara, ahịa na-elekọta na ochichi, ntinye-ụzọ ọpụpụ nnyocha na kwarantaini Bureau, wdg Shanghai chuangkun biology gbara mbọ ime ka teknụzụ nyocha ọhụụ ọhụụ na-abara ahụ ike mmadụ niile uru, hụ na nchekwa nri na uru ọha na eze.
Kwenyero na iji teknụzụ nyocha nyocha ọhụụ ọhụrụ iji hụ na nchekwa nri, baara ndị mmadụ niile uru, mepụta ọha na eze!